Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Ivory Coast Amad Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Amad Diallo na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ha bụrụ, Net Worth, Web and Life Life.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ zuru oke nke nwata, site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Tupu nke a, ka anyị mee ka agụụ na-agụ gị site na nchịkọta nke Bio ya.
Ee, oke ego Man United tinyere iji nweta Amad Diallo akpata oyi wụrụ mmadụ niile n'ahụ. N'ihi ya, anyị niile nwere ajụjụ a na-azaghị banyere nwata ahụ dị ịtụnanya. Dị ka; Ọ ga-emesị gbanwee n'otu ụzọ ahụ Cristiano Ronaldo emere maka United? Guo ka anyi n’enye ihe ndi n’adighi nma na nke bu eziokwu banyere oge mbu o rue oge a.
Amad Diallo Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka Biography Starters, a mara ya na mbụ aha Amara Traore. Amad Diallo mụrụ na 11th nke July 2002 na nna ya chere na ọ bụ Hamed Mamadou Traore na nne, Marina na isi obodo Abidjan, Ivory Coast. Ndị nne na nna Youngster nwere ya dị ka nwa nke abụọ nke Diallo ma ọ bụ Traore ezinụlọ.
O di nwute, Amad biara na onwa ole na ole tutu agha obodo Ivoria bidoro n’afọ 2002. Nke mbu, anyi aghaghi ikwe ka eziokwu bu na o bu onye ndu. Eziokwu, ọ nweghị nwatakiri nwere ike ibi ndụ nkịtị n'oge ahụ, na mpaghara nsogbu. Obi dị m ụtọ na ihe okike mere ka Diallo bụrụ nwata mgbe niile nwere onyinye pụrụ iche.
Anyị enweghị ike ịgọnahụ eziokwu ahụ bụ na oge nwata ya gụnyere ọtụtụ ahụmahụ na-adịghị mma na mwute nke WAR. Agbanyeghị, ịdị adị ya na-egosi na ndị mmadụ ka nwere ike ibili karịa oke ihe ọghọm iji nweta nnukwu ihe ịga nke ọma.
Amad Diallo Ezigbo Ezinụlọ:
… Nwa okorobịa Ivorian a na-eto eto si n'ezinụlọ nwere ike ị nweta ndụ nkezi. N'agbanyeghị na sitere na nzụlite ezinụlọ nke etiti, ndị nne na nna Amad Diallo jisiri ike nweta ụfọdụ ego ha na-eji na njem mba ofesi- gaa Italytali.
Njem ezinụlọ ahụ gara earliertali na mbụ gara nke ọma mana ọ bịara na nsogbu ndị ọzọ. You maara? Player onye egwuregwu Ivorian na ndị ezinụlọ ya jidere n'okwu ikpe mpụ na-akwadoghị na June 2020. Okwu a bụ nke nwedịrị ike igbochi ya ịgba bọl. More nkọwa banyere ikpe- na-abịa mgbe e mesịrị, na-agụ na.
Amad Diallo Ezinụlọ:
Ikekwe ị maghị, enwere ihe nketa ya dị n'Africa karịa ihe a na-ahụ anya. Iji malite, akpụkpọ ojii Amad Diallo na-egosipụta ịkpụ mgbọrọgwụ Africa. N'adịghị ka Wesley Fofana, o jiri oge mbụ ya na-eto n'okporo ámá Abidjan.
N'oge ahụ, ụlọ ezinụlọ Amad Diallo dị ka ndị dị n'etiti obere ụlọ ndị a wuru n'akụkụ mmiri nke Ebrie Lagoon nke dị na Ivory Coast. Onye egwuregwu bọọlụ gosipụtara nke a na soshal midia.
Amad Diallo Ọrụ Akụkọ:
Know maara?… Nwatakịrị nwanyị Ivorian ahụ nọrọ oge niile ọ bụ nwata n'obodo Bibbiano, Italytali. N'oge ahụ, ya na nwanne ya nwoke nke okenye (Hamed Junior Traore) na ụmụaka ndị ọzọ na-egwuri egwu. Hụ na duos gosipụtara ọtụtụ ihe ga-ekwe omume, Fabrizio Gilioli (otu ezinụlọ ezinụlọ) tụrụ aro ka ha abụọ sonyere Boca Barco. Nke a bụ obere ụlọ akwụkwọ mmuta na Barco RE, Italy.
Mgbe ọ dị afọ 12, ọ malitere ọrụ agụmakwụkwọ oge niile na Boca Barco na 2014. Mgbe ọ na-aga n'ihu na ọgbọ dị iche iche, nwa okoro ahụ rutere ahụmịhe football ya. N'oge a, ọ kpara ikpe na AS Lucchese n'okpuru nduzi teknụzụ nke Giovanni Galli.
Amad Diallo Ndụ Ndụ Mmalite:
N'ime ọnwa anọ, onye na-eto eto na-eto eto nwere mmasị na ọtụtụ ndị na-agba bọl na mpaghara na ikike ya dị ukwuu. Ihe bụ, Diallo pụtara dị ka onye kachasị nwee ihe mgbaru ọsọ nke asọmpi a haziri na Disemba 2014. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ya bụ onye ọkpụkpọ kacha nta na asọmpi ahụ.
Ial Ọrụ Diallo na pitch n'oge asọmpi ahụ dọtara ọtụtụ klọb Serie A. N'oge na-adịghị anya, ọ kwagara Atalanta ebe ọ malitere ọrụ ọrụ ya na 2015. Lee ka nwa okorobịa Amad si lee anya n'afọ mbụ ya na Atalanta.
Amad Diallo Biography- tozọ a ma ama Akụkọ:
Na mbu, ọ bidoro otu U-14 nke Atalanta ma sọọ mpi na Giovanissimi Regionali - asọmpi ama ama. Mgbe nke a gasịrị, o nyeere ndị otu U-15 nke klọb ya aka inweta mmeri nke Scudetto site na itinye otu goolu na mmeri 2-0 megide Rome.
Mgbe oge ruru, Amad Diallo bilitere n'etiti ndị otu ya wee kwado onwe ya dị ka onye egwuregwu na-enweghị atụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ nọgidere na-abụ onye na-egwuri egwu, na-enyere aka ma na-enweta ihe mgbaru ọsọ.
N'ịbụ onye a kpọpụtara (mgbe niile) dị ka onye ọkpụkpọ kachasị mma n'etiti ndị ọgbọ ya zigara ndị na-egwu egwuregwu football nnukwu ozi. Tupu ngwụsị nke 2019, Diallo ejirila Atalanta BC merie ọtụtụ mmeri na onyinye ndị ọzọ.
Amad Diallo Success Akụkọ:
N'oge a kara aka, onye ikuku nke Ivoria mere ebube Serie A mbụ na ụbọchị 27 nke Ọktọba 2019. won't gaghị ekwenye ya! Amad Diallo nke batara dị ka onye nnọchi na nkeji 79th ka meriri goolu na mbido mbụ ya. Lelee ememe di egwu nke kpakpando n'eme.
Ihe mgbaru ọsọ ahụ mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ mbụ amụrụ n'afọ 2002 iji akara na ọdụ ụgbọ elu Italiantali. N'etiti ndị niile na-achụ ya, na-arịọ maka mbinye aka ya, ọ bụ Man Utd ka nwere ọfụma. Nke a bịara mgbe nne na nna Amad kwadoro inyefe. Mgbe ọ na-ede akwụkwọ akụkọ ndụ ya, a na-eto eto na-esonyere Manchester United maka ego ruru £ 37.2 nde na Jenụwarị 2021.
Iji kwuo ihe nwere ike ịbụ eziokwu, Amad Diallo nwere ike bụrụ otu n'ime Ndị na-eto eto na-eto eto nke Premier League n'ọdịnihu. Vidio vidio dị n'okpuru ebe a na-enye ọhụụ nke ọkaibe n'egwuregwu bọọlụ-ihe kpatara Man Utd ji nweta ya.
Ọnye na-bụ Amad Diallo Girlfriend / Wife ga-abụ?
N'ezie, ịrị elu nke aha ndị Ivorian ga-ebulite ọtụtụ nkọwa banyere ndụ ịhụnanya ya. Ọzọkwa, a na-agọnahụ eziokwu ahụ na ụdị egwuregwu ya na ọmarịcha anya ya agaghị adọta ụmụ nwanyị nwanyị ga-achọ ịbụ enyi nwanyị ya ma ọ bụ nne nke ụmụ ya.
Dị ka n'oge anyị kere Bio ya, o doro anya na Amad Diallo enweghị mmasị na ime ka ụwa mara enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye ya.
Ndụ nke Onye Amad Diallo:
Ọ na-esiri ọtụtụ ndị na-eto eto ike ịnọgide na-enwe obi iru ala mgbe ha na ndị agadi nọ na-egwuri egwu maka oge mbụ. Agbanyeghị, Diallo egosiputa obi ike dị ukwuu nke karịrị nke onye ọkpụkpọ egwuregwu.
Kedu ihe ọzọ? Ọ dị ndụ dị ka Nicolas Pepe, ma ọ bụ ikekwe karịa. Ọdịmma ya na-eme ka ọ dịrị ya mfe iso ndị otu egwuregwu ndị ọzọ na-akpakọrịta. Ka a sịkwa ihe mere ọ ga-eji nwee ezigbo mmekọrịta Paul Pogba n'oge gara aga tupu ya echee ịbanye Man United.
Ndụ Amad Diallo:
Ọ bụ ezie na akara ngosi winger adịghị ka oge ochie dị ka Eric Bailly, ọ naghị emebiga ihe ókè. Eziokwu bụ, Diallo ka na-anwa ịkwado onwe ya n'ụwa bọọlụ. N'ihi ya, ọ gaghị achọ ka ibi ndụ okomoko ju ya oke. Ma ọ bụghị ya, ọ nwere ike ịkwụsị ọrụ ya.
Amad Diallo Net bara uru:
N'agbanyeghị na ego a na-akwụ kwa izu na Atalanta bụ 1,800 1, ụgwọ ọnwa ya ga-abawanye n'oge na-adịghị anya site na ọ sonyere Man United. N'oge a, anyị emeela atụmatụ na ọnụọgụ ọnụọgụ ya ruru nde XNUMX nde.
Amad Diallo Ndụ Ezinụlọ:
Obi abụọ adịghị ya, ndị ezinụlọ ya na-arụsi ọrụ ike gọziri ezinụlọ ya, ihe dịịrị ọtụtụ ndị si Africa kwabata. N'akụkụ a, anyị ga-ewetara gị ọtụtụ Eziokwu gbasara ezinụlọ Amad Diallo malite na papa ya.
Banyere Amad Diallo Nna:
Nke mbụ, mmekọrịta dị n'etiti Diallo na papa ya, Hamed Mamadou Traore, akpalitela ọtụtụ ajụjụ n'afọ 2020. you maara? Father Nna Amad bụ ihe kpatara mgbanwe aha nna ya si Traore ruo Diallo.
Amad Traore ka ọ bụ Diallo?
O doro anya na akụkọ dị na onye ọkpụkpọ Ivorian nwere ike ọ gaghị enwe mmekọrịta ezinụlọ na nna ya. Nke a bụ akụkụ nke nyocha na-aga n'ihu na mpụga iwu na-akwadoghị nke ndị ọchịchị Italiantali. N'ihi ya enwere ego iji kọwaa ezigbo njikọ dị n'etiti Amad na nna ya kwesịrị ịbụ Hamed Mamadou Traore.
N'ihi nchọpụta na-aga n'ihu, Amad gwara United na ndị na-agba bọọlụ ngwa ngwa ka ha kpọọ ya Amad Diallo na ọ bụghị Amad Traore. His bu ibe ya Wiki (n'oge edere) ka nwere nke ikpeazu ka TransferMkt emelitere.
Banyere Amad Diallo Nne:
Nwanyị a na-enwe ọganihu na-enyere aka na ọrụ ya. Dị ka ọtụtụ ndị nne nke ndị na-agba ụkwụ ụkwụ, Marina Traore guzoro n'akụkụ ụmụ ya site na ọganihu ha na Boca Barco. Taa, ọ na-aghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ya.
Ọbụna n'etiti ọgba aghara Ivorian, Marina ahapụghị ụmụ ya. Kama, o choro uzo isi wepu ha na obodo, ihe omuma nke mere ka Amad banye n'oru uzo football nke ya taa.
Banyere Nwanne Amad Diallo:
Iji malite, o nwere nwanne nwoke nwere ihe ịga nke ọma- yana ndị ịgba ọsọ bọọlụ na-egwuri egwu n'ụgbọ elu Italiantali. A mụrụ Hamed Junior Traore na 16th nke February 2000- nke pụtara na ọ dị afọ abụọ karịa ya.
Nwanne nwoke Amad Diallo (Hamed Junior Traore) malitere ya na football ya na Boca Barco, Northern Italy. N’ịbụ onye ka dị obere, enwere ohere dị elu nke ọrụ ga-aga nke ọma.
Investigation Nnyocha ọpụpụ nke ndị ọchịchị conductedtali mere nwere ike igosi na Diallo na nwanne ya nwoke toro eto (Hamed Junior Traore) abụghị ndị ikwu. Ọfọn, nanị oge ga-ekpughe eziokwu banyere onye ọ bụ nke e zochiworo kemgbe.
Banyere Nwanne Nwanyị Amad Diallo:
Mgbasa mgbasa ozi gbadoro anya na nne na nna ya na nwanne ya nwoke mana ọ dịkarịa ala banyere ndị ezinụlọ ya. Nsonaazụ ahụ egosipụtaghị akwụkwọ maka ịdị adị nwanne nwanyị Amad Diallo.
Amad Diallo ikwu:
N'ịga n'usoro ọmụmụ nna nna ya, ọ nweghị ihe ọmụma banyere nna nna ya na nne nne ya. N'otu ụzọ ahụ, enweghị nkọwa banyere ndị nne na nna ya, nwanne nne ya na ndị ikwu ya ndị ọzọ. Anyi nwere olile anya na o gha agwa anyi ihe ndi ozo banyere ndi ezinulo ya n’oge na adighi anya.
Amad Diallo Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie akụkọ ndụ ya dị ịtụnanya, lee ụfọdụ eziokwu ga-enyere gị aka ịghọta Bio.
Eziokwu nke 1: Ihe mere o ji gbanwee aha ya site na Traore ka ọ bụrụ Diallo- Iwu Mbugharị Iwu:
… Ial Diallo na nwanne ya nwoke bịara cametali maka njikọ ezinụlọ. Agbanyeghị, ndị Ivorians nwere ike ịkwaga mba ahụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị ka nwoke ahụ na-azọrọ na ya bụ nna ya abụghị onye ikwu ya. Nke a bụ ihe mere o ji gbanwee aha ya Amara Traore na Amara Diallo.
N'ime arụmụka ndị a niile, ụmụnna Ivorian enweghị ike ịkwụ ụgwọ ọ bụla maka ebubo ebubo a na-emejọ n'ihi na ha abụọ etorubeghị n'oge ọ mere. N'okpuru ebe a ka ndị nyocha Italiantali nwere ikwu;
“Anyị maara na mbufe ya na Manchester United. Ma anyị ejighị n’aka na ha maara nyocha anyị.
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị amalitela ileba anya n'okwu ahụ. N'ihi ya, ndị egwuregwu abụọ ahụ nwere ike ịta ahụhụ ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ha dara iwu ọ bụla.
Maka onye ọkpụkpọ nke ikike ya, anyị nwere ike ịsị; A na-akwụ Amad ụgwọ n'ụzọ dị oke ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ike egwuregwu ya. Otú ọ dị, a ga-akwụ ụgwọ ọrụ ya site n'oge ọ sonyere Manchester United. Nke a bụ ụgwọ ụgwọ ọnwa Atalanta:
Kwa Afọ £ 93,744
kwa ọnwa £ 7,812
Kwa Izu £ 1,800
Kwa .bọchị £ 257
Kwa elekere £ 11
Kwa Nkeji £ 0.18
Sekọnd £ 0.003
Anyị etinyela atụmatụ nyocha nke ego Amad Diallo na-enweta ka elekere na-akụ. Chọpụta n'onwe gị ego ọ na-enweta kwa sekọnd.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Amad Diallo's Bio, nke a bụ ihe o nwetara…
Eziokwu nke 3: FIFA profaịlụ:
Dị ka nwata Wilfried Zaha (azụ na ụbọchị), stats nke Amad Diallo nwere ike ime ka ị kwenye na ọdịnihu ya ga-enwe nnukwu ọganiihu. N'agbanyeghị ọsọ na ike dribbling, nyocha 2020 FIFA ya dara ogbenye. Ka o sina dị, anyị niile na-atụ anya oge ezumike nke ụtụtụ ọhụụ na ndụ ọrụ United.
N'ikpeazụ, anyị kwesịrị ịmụta ihe site na obi ike Amad Diallo. Cheta, ọ bụrụ na ọ kwenyeghị na ike ya, ọ gaghị egosipụta onwe ya na mmalite ọkachamara ya.
Ọzọkwa, ikpe nke ezigbo nne na nna ya agbanwebeghị. Ihe oma anyi choro bu ka anyi na ndi Amad Diallo, ndi n’esiri ya ike n’ikpe a gbasara iwu ndi obodo n’abia. Anyị nwere olile anya na ha ga-esi na nsogbu ahụ pụta na-emerụghị ahụ.
Daalụ maka ịgụ Biography nke Amad Traore ma ọ bụ Diallo. Obi oma Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na isiokwu anyị. Ma ọ bụghị ya, ka anyị mara (na nkọwa ngalaba) ihe ị chere banyere Onye na-eto eto.
Aha mbụ: Amara Traore
Aha ugbu a: Amara Diallo
Ụbọchị ọmụmụ: 11th July 2002
Ebe amụrụ onye: Abidjan, Ivory Coast
Nna: Aha ya bụ Mamadou Traore
Nne: Marina Traore kwuru
Ụmụnne: Hamed Junior Traore (nwanne nwoke okenye)
ụgwọ: £ 1,800 (kwa izu)
-arụ: Onye na-agba bọl